Ny Fanomezam-Pahasoavana Mihira | EGW Writings
Ilaina ireo izay manana fanomezam-pahasoavana mihira. Iray amin’ireo fitaovana mahomby indrindra amin’ny famelana marika ao am-po ny fahamarinana ara-panahy ny hira. Matetika ireo tonon-kira masina no mamoha ireo loharanon’ny alahelo sy ny fanenenana ary ny finoana. Tokony hobeazina ny mambran’ny fiangonana, ny tanora sy ny olon-dehibe, mba handeha hanambara ny hafatra farany ho an’izao tontolo izao. Raha handeha amim-panetren-tena izy ireo, dia hiaraka amin’izy ireo ny anjelin’ny lanitra, mampianatra azy ny fomba hanandratana ny feony amin’ny vavaka, sy hanandratana ny feony amin’ny hira, ary ny fomba izay hitonana ny hafatry ny filazantsara ho an’izao fotoana izao.HAT 191.1
Ry tanora lahy sy vavy, tanteraho ny asa izay niantsoan’Andriamanitra anareo. Hampianatra anao hampiasa ireo fahaiza-manao ho amin’ny fikendrena tsara i Kristy. Raha mbola mandray ny fanetsiketsehan’ny Fanahy masina ianao, ary mikatsaka ny hampianatra ny hafa, dia ho velombelona ny sainao, ary ho afaka ny haneho ireo teny izay vaovao sy mahafinaritra tokoa ny mpihaino anao ianao (...).HAT 191.2